Kufamba mune akanyanya Mawiricheya Akanaka Maguta | Karman® Mawiricheya
Ndezvipi zvakanyanya pasi wiricheya inoshamwaridzika maguta? Kana zvasvika pa wiricheya-inoshamwaridzika kufamba, kwete nzvimbo dzese dzine mukana wekuwana uye nharaunda. Mamwe maguta kutenderera pasirese ane akaita matanho anorumbidzwa akananga. Saka kuva kufambidzana uye ndakawana kuonga kwevashanyi vanoshandisa wiricheya. Kana iwe uchida kusvetuka kune edu atinofarira, vhidhiyo yaNara ndiyo yakanakisa!
Pano, tinopa sarudzo yedu yepasirese pamusoro wiricheya-guta rine hushamwari kuti upe kurudziro yerwendo rwako runotevera. Usakanganwa, iwe paunenge uchifamba, isu tine yakafara network yevatengesi inowanikwa kukushandira. Ingo punchira mune yako zip kodhi kana enda kune yedu Global Network kana uri kunze kweU.S.
Barcelona inoonekwa seimwe yeakanyanya maguta anowanikwa muEurope. Izvi ndizvo zvatinofarira. Ose mabhazi aro, mazhinji emigwagwa yemetro, uye chikamu chikuru chemigwagwa yeguta iri wiricheya-kufambidzana - kunze kwenzvimbo dzakachinjikwa, vanofamba netsoka, uye necobblestone-isina Ciutat Vella (chiCatalan che'Guta Rekare ').
Ruzhinji rwezvinokwezva senge Sagrada Família, Park Güell, uye Casa Mila vanobata remara kuwana, neiyo yapfuura kupa pachena mahara kupinda wiricheya-vashandisi. Asi chikamu chinokwezva cheguta rino kune avo vane akaderedzwa kufamba rinofanira kunge riri iro gungwa. Zvine wiricheya-inosvika nzira dzinoenda kumvura, kufambidzana inoshandura madhipatimendi, uye yemahara rubatsiro rwekugeza sevhisi mukati memwedzi yezhizha.
Hotel Casa Camper ndiyo yakanyanya kukosheswa kufambidzana hotera muBarcelona, ​​nemazhinji emakamuri ari wiricheya-inoshamwaridzika uye maviri achinyatsogadziriswa.
Seattle inogona kunge iri guta rine makomo asi inowanzo shambadzirwa seyakanyanya kufambidzana guta kuNorth America. Zvese - kubva kumatekisi nemabhazi kuenda kunhandare yendege uye mikova - ndizvo wiricheya-shamwari, ne wiricheya marambi, uye maelevhuru, uye neLink Light Rail system iyo yakagadzirirwa kuwedzera kuwanikwa. Asi hazvisi chete kutakura izvo zvinoita kuti Emerald Guta rive rakakurumbira kune vafambi vane yakaderedzwa kufamba.
Mazhinji ezvinonyanya kuona akakwana kufambidzana. Kunyangwe iwe uchida kuvhara kumusoro kwechiratidzo cheguta rekucherechedza shongwe, Space Tsono, kana kutora rwendo rwechikepe kune whale uchiona dzakatenderedza zvitsuwa uye nzira dzemvura dzePuget Sound. Kunyangwe nzvimbo dzakapoteredza nzvimbo dziri akapiwa ine boardwalks uye ekuona mapuratifomu. Zvimwewo kufambidzana zvinotyisa izvo wiricheya vashandisi vanogona kuongorora vanosanganisira yekumberi kwemvura Pike Nzvimbo Musika uye 175 tsoka-refu Seattle Great Wheel.
Guta reLondon rinonyatso kuzivikanwa kuve imba yemablack cabs. Guta rine angangoita mazana maviri ezviuru macabbi matema, anowanzo kuwanikwa muLondon mafirimu nemaTV. Chinhu chakanakisa pamusoro pavo ipfungwa yavari wheelchair zvachose kufambidzana. Saka izvi zvinoita kuti uwane kubva pane imwe nhanho kuenda kune imwe mukati meLondon. Nekuti senga nhema machabhu haisi yako chete sarudzo. Zvimwe zvikamu zveLondon senga maitiro ari wiricheya kufambidzana uye saka zviri pachena kuona kuti nei iri imwe yeanonyanya kufarirwa wiricheya-inoshamwaridzika maguta munyika.
Yenzvimbo iyo yakawanda yemapurani yakadzokera kumashure mazana emakore, London zvinoshamisa kwazvo kufambidzana nokuti wiricheya vashandisi. Iyo Tube inoonekwa seye yekare njanji yepasi pevhu asi chidimbu chezviteshi chine nhanho-yemahara yekuwana uye iwe unogona kugadzira yako kufambidzana nzira pamberi kushandisa iyo TfL (Yekutakura yeLondon) webhusaiti.
Ese mabhazi uye matema macab ari wiricheya-kufambidzana. Izvi zvinoratidza kuti unogona kukwazisa nekukwira mutekisi yako usingade rubatsiro. Uye zvine chekuita nezvinokwezva, vazhinji vacho vatova nazvo migero yewiricheya uye nyore kuwana. Hurumende iri kushanda pakuwedzera mitemo yekuwana inoda kuti zvese zvinokwezva vashanyi. Izvi zvinosanganisira hotspots yekuwana yakakwana kupinda pawiricheya. Zviitiko zve wiricheya inotakurika ramp muguta rose kuwedzera wiricheya mukana wekuwanika.
Berlin iguta rinozivikanwa zvinoshamisa rinokwevera mamirioni e vanoshandisa wiricheya kubva kumativi ese epasi gore rega. Nekuda kwekuzivikanwa kwayo, huwandu hwakawanda hwekudyara hwakaiswa mukuwanika nyore kuti vanhu vazhinji vagone guta kuzere. Veruzhinji kutakura systemKuwanikwa kuri kwechipiri kune uye kunopa zviri nyore kufamba ne migero yewiricheya uye maelevhuru.
Zvakare, Berlin inozivikanwa pasirese pasirese nekuve yakapfuma munhoroondo, zvinoreva kuti kune zvakawanda zvekuona zvekuita mukati. Zvakawanda zvezvinhu zvinokwezva zveguta zvakarongerwa zvinopa nyore kuwana kwe wiricheya vashandisi uye kunyange vane yemahara yekupinda, senge mukati memasuwo eBerlin Wall uye neBrandenburg Gate. Zvizhinji zvezvinhu zvinokwezva zveBerlin zviri mukati mekufamba chinhambwe kubva kune mumwe.
Wese munhu anodzoka kubva kuJapan achiratidza kuti vaizvida zvakadii, uye newewo unogona kudaro!
Kupfuurirazve, kune hwakawanda hwemakwenzi uye migero yewiricheya neakasarudzika ekutanga iwo kune avo vanozvida. Hazvina kunaka here! Chokwadi chinotaurirwa, Japan ndiyo yatinonyanya kufarira. Pasina kutaura, vanhu vakanaka kwazvo! kufambidzana dzimba dzekugezera dzeveruzhinji dzinowanikwa mukati meguta. Izvo zvinokwezva zvikuru zvese zviri padhuze ne kufambidzana chiteshi chechitima uye ivo vari zvichienzaniswa nyore kufamba. Mazhinji emamiziyamu ari wiricheya zvine hushamwari, sezvakaita minda inozivikanwa yeShinjuku Gyoen National Garden, Nara Park, uye Sango reBamboo. Kuwana kufambidzana hotera inogona kuve dambudziko sezvo Tokyo isingazivikanwe nemakamuri ayo mahombe, asi inowanikwa. Ingo tarisa kaviri nehotera maererano nezvaunogona kuwana.
kuva wiricheya mushandisi hazvireve kuti unodzivisa kutora zororo. Ndinovimba yedu runyorwa rwe wiricheya inoshamwaridzika maguta kutenderera pasirese anokuwanisa iwe kukurudzira uye kufamba. Tanga kutsvaga nendege dzenyika dzakachipa kushanyira dzimwe zvinoshamisa wiricheya-shamwari maguta nekukurumidza sezvazvinogona.
Chiedza Wiricheya muSeattle, WA
Maguta epamusoro makumi maviri eUS eVashandisi veWiricheya
Gadzira Wiricheya Yehukama Imba kune Vako Vaunoda
Kugadzira yako Wiricheya Yekumba Yakanaka
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya uye tagged isina kurema wheelchair, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu.